Khabiirka Warbaahinta Bulshada
Isticmaalka Warbaahinta Bulshadu Maaha Khabiir Sameeya
Talaado, July 14, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddana maanta mar labaad ayaa laygu casuumay dhacdooyin faro ku tiris ah - shaqsi ahaan iyo websaydh intaba - si aan ugu soo gaadho a khabiirka baraha bulshada iyo waxay ka qaataan suuqgeynta warbaahinta bulshada. Markii aan dib u eegay astaamahooda, macluumaadkooda LinkedIn, boggooda iyo boggooda, ma helin macluumaad muhiim ah oo taageeraya ujeeddada inay yihiin khubaro warbaahinta bulshada ah.
warbaahinta bulshada khabiir? Runtii? Waxaa laga yaabaa inay haystaan ​​tobanaan kun oo taageerayaal Twitter ah, boqolaal faallooyin ah iyaga Facebook darbiga, iyo ka mid noqoshada dhowr iyo toban shabakadood. Waxaa laga yaabaa inay tahay a charlatan, shark ama geek.
Maxaan ku kala saari karaa warbaahinta bulshada khabiir? Waan jeclahay liiska Peter Shankman ee shahaadooyinka iyo u-qalmitaanka khubarada warbaahinta bulshada. Waxaan ku dari lahaa - hadii ay tahay mid ganacsi - waxaan jeclaan lahaa inaan arko a liis dheer oo la cabbiri karo natiijooyinka iyo tixraacyada guud ahaan shirkado iyo xeelado kala duwan.
Miyaan naftayda u kala saaraa sidii khabiir? Waan sameeyaa - laakiin maahan maxaa yeelay waxaan sheeganayaa inaan wada fahmay. Tani waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo isbeddelaya maalin kasta. Waxay beddeleysaa habdhaqanka ganacsiga. Waxay beddeleysaa dhaqanka macaamiisha. Tobaneeyo sano oo waayo-aragnimadayda ah oo ka soo ifbaxay suuqgeynta tooska ah iyo suuqgeynta keydka macluumaadka, suuqgeynta iimaylka, iwm ayaa ii suuragelisay inaan si dabiici ah ugu gudbo xaaladdeyda hadda.
Uma sheeganaayo inaan ahay khabiir aqoonta aan u leeyahay baraha bulshada… Waxaan isku sheegaa inaan khabiir ku ahay shaqada aan u qabtay shirkadaha waaweyn iyo kuwa yar yar si ay u kobciyaan ganacsigooda, u hayaan una kiciyeen macaamiisha, una yareeyaan wicitaanada adeegga macaamiisha si wax ku ool ah u adeegsiga warbaahinta bulshada.
Miyaan sheeganayaa inaan khabiir ku ahay shaqada aan hadda qabto darteed?
Inkastoo VP ee barta internetka, Waxaan ka caawinnay daraasiin ganacsi inay horumariyaan barahooda bulshada iyo istaraatiijiyado raadin si loo wado dadaalada suuq geynta.
Waxaan leeyahay guul Wakaaladda Warbaahinta Cusub oo leh taariikh adag oo ka caawinta shirkadaha horumarinta iyo fulinta istiraatiijiyadooda bulsheed.
Qalabka is-dhexgalka iyo otomaatigga ee aan ku soo saaray hubkaa, email, video iyo moobiilku wuxuu gaadhay tobanaan kun oo shirkadood.
2 The bulshada shabakadaha Waxaan ka caawiyay bilaabida iyo sii wadida caawinta orodka.
Boggeyga gaarka ah oo udhaxeeya 5 + sano (oo lagu daray lamaane dheeraad ah oo ku yaal meelaha kale) oo la hadlaya warbaahinta bulshada iyo tikniyoolajiyadda suuqgeynta.
MAYA! Midkoodna tan iima qalmo sida khabiir.
Waxaan isku magacaabaa khabiir seddex sababood:
Ganacsiyada ayaa raadinaya khubaro, maahan gurus iyo geeks.
Isugu yeerista khabiir naftayda waxaan ku hayaa heer sare iyo rajo shirkadeed oo ay tahay inaan fuliyo.
Aniga ayaa ku habboon qeexitaanka:
Khabiirku waa qof si weyn loogu aqoonsan yahay inuu yahay ilo farsamo ama xirfad lagu kalsoonaan karo oo awooddeeda garsoorka ama go'aaminta si sax ah, caddaalad ah, ama xikmad leh ay asaaskood ama dadweynahu ku siinayaan awood iyo xaalad gaar ah meel gaar ah oo si fiican loo yaqaan. Khabiir, guud ahaan, waa qof aqoon durugsan leh ama karti u leh meel gaar ah oo wax lagu barto.
Miyaan ka caqli badanahay dadka kale ee halkaas jooga? Nope.
Ma aqaan wax walba oo ku saabsan warbaahinta bulshada? Dabcan maya.
Khubaro kale miyay had iyo jeer ila raacsan yihiin? Ma ahan fursad!
Shaqadayda oo dhami miyaa lagu guuleystay? Maya - laakiin in badan oo ka mid ah ayaa leh.
Waxaan aaminsanahay inaan helay karti aad u fiican oo aan ku falanqeeyo hababka ganacsiga, suuq geynta, iyo go'aaminta sida teknolojiyaddu u dabooli karto farqiga. Ma yeelo beenta macaamiisha una sheeg inay waajib ku tahay inay ka mid noqdaan warbaahinta bulshada haddii ay doonayaan inay noolaadaan. Waxaan la wadaagaa iyaga qaar badan oo ka mid ah guulaha, in kastoo! Waa dhexdhexaad aan shaqsiyan aaminsanahay oo aan rajeynayo inaan arko korsashada ballaaran - maahan maxaa yeelay waxaa maareyn kara ganacsiyada xun - laakiin maxaa yeelay waxaa ka faa'iideysan kara ganacsiyada waaweyn.
Waxaan rumeysanahay in baraha bulshada ay ku xirmaan ganacsiyada rajooyinka, waxay dhisaan xiriiro hagaagsan oo u dhexeeya macaamiisha iyo shirkadaha, waxay ku riixdaa shirkadaha inay hagaajiyaan adeegga macaamiisha, waxay dhisaan daahfurnaan, waxayna dhiirrigeliyaan hoggaaminta fikirka, karti-xirfadeedka ganacsiga iyo horumarka… dhammaantoodna waxay ku fiican yihiin ganacsiga.
Taasna, saaxiibbaday, waa tayda khabiir fikrad
PS: Waan hubaa haddii aad dib ugu noqoto meel ku filan boggeyga ama faallooyinka ku saabsan baloogyada kale ee aan u jeexjeexay dhowr qof oo dad ah oo iskood u dhawaaqay aqoontooda. Hadda waa adiga markiisa. 🙂
Lasoco Fiidiyowyadaada Youtube
Sida loo Sameeyo Email si uu uga soo kabto Macaamiil
Jul 14, 2009 markay ahayd 8:48 AM
Waxaan u arkaa mid xiiso leh in laba bog oo kala duwan aan ku akhriyo qiimaha 'khabiir' waa laga doodi karaa. Labo qoraal oo aan horey u aqriyay waxaa loola jeedaa in la iska indhatiro (oo markii dambe la shaqaaleeyo) qof kasta oo adeegsanaya ereyga 'khabiir' qayb ka mid ah aqoontooda, haddana waad soo jeesaneysaa oo waxaad soo xiganeysaa mid ka mid ah isla maqaallada maqaalka oo sabab u ah inaan kuugu yeero khabiir , iyo kadib markaad tixraacdo qodobka waxay tilmaamaysaa inaad khabiir tahay. Marka waa maxay Miyaan kugu kalsoonahay maxaa yeelay waxaad isku tixgelisaa inaad tahay khabiir oo waxaad sheegtaa Shankman, mise miyaan iska indha tirayaa wax kasta oo aad halkan ka tiraahdo wixii ka soo kordha maxaa yeelay waxaad isu aragtaa khabiir waxaadna sheegtaa Shankman? Ha igu qaldan, waan ku qanacsanahay wax kasta oo aad soo qabatay, waana la socdaa balooggaaga sidaa darteed waxaan sida muuqata u arkaa qiimo waxa aad sheegto… laakiin khilaafaadka sidan oo kale ah ayaa ah sababta ay macaamiishaydu u wareersan yihiin.
Jul 14, 2009 markay tahay 12:28 PM
Nabad Robert! Waxaan gabi ahaanba qirayaa is burinta - xitaa munaafaqnimo - qaybtayda ku jirta qoraalkan. Waxaan tixraacayaa qoraalada kale maxaa yeelay waxaan jeclaan lahaa wadahadalka inuu ku sii socdo aragtiyo kala duwan. Waagii hore, waan iska ilaalin jiray ereyga 'khabiir'. Intii aan sii waday in aan hawlo badan ka qabto berrinka, haddana, waxaan arkayaa dad aad u tiro badan oo adeegsanaya cinwaanka 'khabiir warbaahinta bulshada ah'.
Waxaan isku arkaa meel ka mid ah shaqadayda oo aan ka walaacsanahay in ganacsiyada ay khiyaaneeyaan 'khabiiro' isku sheega laakiin ganacsatadu waxay sii wadaan inay raadiyaan. Miyaan sii wadaa daawashada meheradda oo aan u tago dadka aan lahayn khibrad ama 'khibrad'? Ama - miyaan ku dhawaaqaa naftayda khabiir, ma caddeeyaa qiimahayga, oo ma helayaa ganacsigaas?
Waxaan isugu yeedhi doonaa khabiir halkan wixii ka dambeeya faa'iidooyinka ganacsiga awgood. Sidoo kale - Waan ku qanacsanahay adiga iyo akhristayaasheyda kaleba inay igu hayaan heer sare!
Mahadsanid - runtii waan ku qanacsanahay faallooyinka!
Jul 14, 2009 markay ahayd 6:14 AM
Waan kugu raacsanahay adiga Douglas. Waxay qaadataa khibrad sannado ah oo leh wax soo saar wanaagsan (oo ay kujirto qofka guuldarrooyinkiisa, waxaan kaliya tirineynaa sida qofku u kacay kadib guuldarrooyinkaas waana sababta ay weli u wanaagsan tahay) in loogu yeero khabiir. Lahaanshaha kumaankun taageerayaal ah oo ku leh Twitter kama dhigayso mid.
Jul 14, 2009 markay tahay 12:51 PM
Ma jiro anshax kale oo aan ku arkay dooddan badan ee ku saabsan cidda khabiir ku ah, cidda aan ahayn iyo waxa ka dhigaya shuruudaha lagu gaadho heerka aqoonyahannada. Waan fahamsanahay welwelka aniga sidoo kale, waxaan arkay dad badan oo isku sheega khabiiro baraha bulshada laakiin maheystaan ​​khibrad suuqgeyn oo ay kula socdaan. Iyagu way yaqaaniin aaladaha, laakiin kama dhigayso inay khabiir ku yihiin suuqgeynta iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada kanaalka.
Waxaan suuq ka ahaa sanado ka badan inta aan daneynayo in aan qirto, waxaanan bartay anshaxa suuq geynta dhamaan wadiiqooyinka, anigoo isticmaalaya dhamaan noocyada tabta, laga bilaabo istiraatiijiyadda ilaa fulinta. Ku darida warbaahinta bulshada kanaalka kale ee suuq geynta waa horumar dabiici ah waana mid, nasiib daro dad badan oo suuqleyda ah ayaa iska indhatiray ilaa goor dhaweyd markii ay ogaadeen inay sifiican uxisaabtamayaan waxyaabahaan.
Laakiin dadka kaliya ee kugu dhawaaqi kara inaad khabiir tahay waa macaamiishaada iyo macaamiishaada. Iyagu waa caddaynta ereyga ansaxaysa.
Jul 15, 2009 markay ahayd 4:13 AM
Waan ku raacsanahay faallooyinkaaga si kal iyo laab ah, ereyga "khabiir" waxaa loo adeegsadaa si fudud oo fudud. Waan ka warqabaa tiro dad ah oo iyagu isku suuq geeya inay khabiir ku yihiin baraha bulshada oo hadana ka xada qorayaasha kale fikradaha iyo istaraatiijiyadaha oo iyaga ugu yeera kuwo iyaga u gaar ah. Waxaan ku guda jiraa hawsha hada abuurida iyo dhisida istiraatiijiyad bulsheed mid ka mid ah wadamada ugu waaweyn kooxaha guryaha dhista taasna waxay ii ahayd il furitaan dhab ah. Waan ku raacsanahay Deborah ra'yigeeda, in kaliya macaamiisha iyo macaamiisha ay kugu caleemo saari karaan sumadda khabiirka. Wali waxaan baranayaa cadaab badan wax walbana khabiir ma ihi, laakiin waan ku shaqeynayaa. Maqaal weyn
Jul 15, 2009 markay ahayd 4:17 AM
Grrrrrrrrrrrrrr .. Maxaan xitaa ugu qasbanahay inaan ku dhawaaqno khubaro - Ma helayo dooda oo dhan. Jaangooynta iyo ka hadalka waxay ka qaaddaa tamarta nolosha. Runtii ma tahay mid u qalanta isticmaalka tamarta?
Jul 15, 2009 markay tahay 5:12 PM
Waxaan u muuqdaa inaan kugu raaco. Marwalba waxaan dareemaa isku kalsooni naftayda ah oo naftayda ah oo cinwaankeedu yahay 'khabiir'. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqdu waxay tahay in ganacsiyada ay raadinayaan 'khubaro' oo kaliya kuwa isticmaala cinwaanka ayaa la heli doonaa.
Jul 17, 2009 markay ahayd 2:10 AM
Markii aan ku aqaanay oo aan kaala shaqeynayay mashaariic kala duwan, waxaan dhihi karaa waxaan si kal iyo laab ah u taageersanahay inaad u tixraacdo nafsadaada sida khabiir. Sidaad sheegtay, cinwaanku wuxuu ka yimaadaa guulahaaga iyo waliba guul darrooyinkaaga sida uu ku sheegay David faallooyinka ugu horreeya. Waxay u badan tahay inuu kula sii duugoobayo, laakiin waxaan ogahay markaan su'aal ka qabo wax la xiriira tikniyoolajiyadda iyo warbaahinta bulshada inaan heli doono jawaab ku saleysan khibrad, aqoon iyo kalsooni Taasi waa waxa aan ka raadin lahaa khabiir ku takhasusay mowduuc kasta ama warshado kasta.
Nov 4, 2011 saacadu markay tahay 12:52 PM
Doug, tani waa boosteejo wacan dhowr sababood awgood.
1. Waa mid toos ah oo ujeedkeedu yahay: Maya BS Waxaan jeclahay inaan ka boodo cunnada oo aan tago koorsada weyn.
2. Waa sax: Geek kasta wuu garan karaa sida loo saxo warbaahinta bulshada, laakiin khubaradu waxay abuuraan ganacsi (aka “khadka hoose”).
3. Waa daacad: Waxaan halkaan ka baareynaa soohdin cusub oo socda oo si xawli ah isu beddeleysa. Khubarada dhabta ahi waa kuwa kalsoonida leh hadana is-hoosaysiinaya si ay daacad u noqdaan oo dhahaan, "Ma garanayo", ka dibna waxay helayaan jawaabta, iyagoo iska dhigaya inay wada garanayaan.
Nov 4, 2011 saacadu markay tahay 12:56 PM
Aad buu u qadaray, Mike!